Porn တက်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကျသွား? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
တစ်ဦးမှတဆင့် ကံကြမ္မာ၏ flukeကြှနျတေျာ့က်ဘ်ဆိုက် porn မှမိမိတို့နို့ကွာဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ယောက်ျားအပါအဝင်အချို့သောအံ့သြဖွယ်လူများ, များအတွက် Hangout ဖြစ်လာသည်။ သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုငါ့ကိုအစဉ်အမြဲငါဒီဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. သိလိုထက်ပိုပြီးသွန်သင်ပြီ။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတဦးတည်းရေးသားခဲ့သည်,
ငါလေ့လာမှုတစ်ခုအမှန်တကယ်ရိုးသားယောက်ျားနှင့်အတူပြုမိလျှင်, porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုမြင်ရမယ်လို့သေချာဖြစ်၏။ အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မပြည့်မအများပြည်သူ၏အားသာချက်ယူပြီးဘီလီယံစေသည်။ ထိုအခါဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပြုမူဆက်ဆံဘီလီယံလုပ်အကုန်အကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးရောင်း။
လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ်ကကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်တက်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်မှာစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့နိုးထဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှယေဘူယျ Viagra သည်ငါ့ကိုအသက် ၂၉ နှစ်တိုင်အောင်ပြfewနာအနည်းငယ်နှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံမှုပြုရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်ဆေးပြားများနှင့်ပင်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံရန်ပိုခက်ခဲလာသည်။
ငါ၏အပြဿနာသဘောပေါက်ငါ porn အရှုံးမပေးဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါကမပါဘဲကြာအရှည်ဆုံး3ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်မပုံမှန်လိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်ဘူး, ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ porn ကိုကြည့်သောအခါငါဖွံ့ဖြိုး fetishes အကြောင်းကိုကူးယဉျ: ငါ့အသာလွတ်ငါ့ကိုနှိုးဆှမယ်လို့တစ်ခုတည်းသောအရာသို့ပြန်လဲကျဖို့ပဲ။ ထိုအခါကပြန် porn ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါဒီပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်တက်ထားပါတယ်သကဲ့သို့, ဗီဒီယိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှိပါတယ်။ သူတို့က ပို. ပို. လွန်ကဲ-နှင့်ထက်အများကြီးပိုလှုံ့ဆော်, အလွယ်တကူများမှာ Playboy အတိတ်၏ Alas, ကျွမ်းကျင်သူအများစု "၏စည်းကမ်းချက်များ၌စဉ်းစားကြသည်မဟုတ်ဒီဂရီ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒချိန်ခွင်လျှာ / ဝါယာကြိုးထိခိုက်ဆွ၏။ " သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာတစ်ခုတည်း” ဟုသာမှတ်ယူပြီးအန္တရာယ်ကင်းသည်၊ အင်တာနက်ဗီဒီယိုများသည်မကြာသေးမီကဤလမ်းကြောင်းသို့ရောက်ရှိနေသဖြင့်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည်ယနေ့ porn ၏အဖြစ်မှန်နှင့်ယင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်အမီလိုက်ရန်အချိန်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
porn / potency connection သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သစ္စာမဲ့သူဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအများစု၏စွမ်းရည် မဖြစ် porn ကြောင့်ထိခိုက် ... ကသည်အထိ။ ထို့ကြောင့်သူသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ထိမိသည်အထိပြproblemနာသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပုံရသည်၊ ထိုအချိန်တွင်သူသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့် porn ကိုမှားယွင်းလေ့ရှိသည် ကုမ။ ပိုများသောအစွန်းရောက်ပစ္စည်းနောက်ထပ်သူ့ဦးနှောက် desensitizes ။ ဒီမွတ်ဆလင်မှာအများဆုံးလူတို့သညျမိမိတို့၏ကြီးထွားလာမှီခိုမှုကြောင့်မိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ထက်အခြားမည်သည့်ရှင်းပြချက်မှာ clutch ။
များသောအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများကအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းသည်ဤအာနိသင်ပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းအမျိုးသားများစွာအတွက်မူ ဦး နှောက်မှဓာတုဗေဒဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်နှိုးဆွခြင်းမှအကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်နှင့်ချီ။ ရောင့်ရဲစွာအသုံးပြုခဲ့ကြရုံသာမကအရှက်ရစေသည့်အကြောင်းရင်းများရှိလျှင်ပြtheနာများပိုမိုမြန်ဆန်လာနိုင်သည်။ ယောက်ျားများစွာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမပြီးမချင်း NO ပြexperienceနာများကြုံတွေ့ရသည်။ ထိုအခါပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေသည့်အခါပိုမိုဆိုးရွားလာသည်နှင့်အမျှထပ်မံကျဆင်းလာသည်။ (အရှက်ကွဲခြင်းသည်အမြဲတမ်းဆီလျှော်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်လိင်မှုကိစ္စပြုစေနိုင်သည် ပိုပြီးအပြင်းအထန်နှိုးဆွသော, အရှင် desensitization သံသရာအရှိန်မြှင့်။ )
ကောင်းမွန်သောသတင်းမိုးသည်းထန်စွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံ Reversible လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနာကျင်အစိတ်အပိုင်းဝေဒနာသည်မိမိအ compulsive porn အသုံးပြုမှု-တစ်ကြောင်းယဇျပူဇျောလက်နက်ချဖို့ရှိပါတယ်ကြောင်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့.
porn ၏နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါစိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာစုံတွဲတစ်တွဲကိုနှစ်ပေါင်းပိုဆိုးနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီခဲ့သညျ။ porn ဆွ၏ပိုပိုပြီးအမျိုးအစားများကိုလိုအပ်နှင့်နေဆဲကူညီပေးနေမခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါတကယ်စိုးရိမ်ခဲ့ပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်ပဲပိုမိုနက်ရှိုင်း porn ထဲသို့ငါ့ကိုတွန်း။ အဆိုပါတိုးတက်မှုပေးထား, ယုံကြည်ဖို့ခက်။ ကလေးက porn: ငါဖြစ်ကောင်းတဦးတည်း မှလွဲ. ထွက်ရှိညစ်ညမ်းပုံရိပ်နှင့် vid အမျိုးအစားတိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဘယျသို့အကြှနျုပျကို scares ဖြစ်ပါသည်, ငါတနေ့လွန်းသောလမ်းကြောင်းပြီနိုင်မည်နည်း
ပိုငါကပိုခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်လာ, porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မပါဘဲသွား မဟုတ် တစ်ခုစိုက်ထူရ။ ဟားဟား။ ပညာရေးပြဿနာများသို့မဟုတ်ကိုယ့်လအနည်းငယ်အကြာခဲ့တူသောအားနည်းသုက်မရှိပါ။ အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာအနာကိုငြိမ်းစေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကထွက်သွား porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်မယ့်ဒီတိုတောင်းသောကာလအတွက် up ပြုလုပ်ပေးခြင်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြုထိခိုက်ပျက်စီးမှုငြိမ်းစေလျက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကာလကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။
porn / masturbation မှရက်ပေါင်း ၉၀ ရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတဲ့နောက်ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ငါ့ကို ဦး ချိုစေဖို့အခြားလှုံ့ဆော်မှုမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်တော့တယ်။ ယခုငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ပြန်ရောက်လာသောအခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြိမ်နှုန်းနည်းသောစမ်းသပ်မှုများ၌ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့် (သူတို့နှင့်အတူအိပ်ရာဝင်ခဲ့ရသည်) ကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြောင်းသတိပြုမိသည်။
ငါ porn စားသုံးနေစဉ်ရိုက်နှက်နေစဉ်, အမှန်တကယ်လိင်မှလာသောအခါငါပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါသွားပြီ ငါပြnoနာမရှိဘူး “ Cum Gurgling sluts” ဗီဒီယိုကလစ်များအစားသေးငယ်သောအရာများဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသသည့်အင်္ကျီ၊ အပြစ်မဲ့သောကွက်လပ်၊ နွေရာသီဝတ်စုံသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စီးသော၊ တောက်ပသောဆံပင်နှင့်အမွှေးနံ့သာများကြောင့်နှိုးဆွခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ဒီ porn-ED ကိစ္စကပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုလာတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါဟာပြproblemsနာအများကြီးကာကွယ်တားဆီးဖို့တာပေါ့။ လူတွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရံဖန်ရံခါကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအကြောင်းများကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အခြားသိသာထင်ရှားသည့်အခြားအရာများနှင့်လည်းဖျော်ဖြေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်မည်သည့်မိတ်ဖက်လိင်မှမပါဘဲရှည်လျားစွာလမ်းလျှောက်သွားပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့လျှင်၎င်းတို့၌ယခင်ကမရှိခဲ့သည့်အခက်အခဲများရှိခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါအဆိုအရ -Norman Doidgeတစ်မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူမတူပဲမဟုတ်ပါဘူး
တစ်ချိန်ကသူ့ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သောပုံရိပ်တွေကိုအစဉ်မပြတ်နိုင်တော့တဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲသူ။ အန္တရာယ်ကဒီသည်းခံစိတ်ဟာငါမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့လူနာတွေလိုပဲ၊ အလားအလာကောင်းတဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့တစ်ခါတစ်ရံမလိုလားအပ်တဲ့အရသာအသစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့ဒီသည်းခံမှုဟာဆက်ဆံရေးကိုကူးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာများသည်စာအိတ်အသစ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုဝါကြွားသည့်အခါသူတို့ဖောက်သည်များသည်အကြောင်းအရာအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောကြောင့်သူတို့မလုပ်သင့်ပါ။ အမျိုးသားစွန့်စားခန်းမဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နောက်ကျောစာမျက်နှာများသည် Viagra အမျိုးအစားဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ လိင်တံတွင်အိုမင်းခြင်းနှင့်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သောစိုက်ထူသည့်ပြproblemsနာများရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆေးဝါးကိုကြော်ငြာများဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့လူငယ်လေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရခေါ်ဝေါ်ကြသည့်အတိုင်းခွန်အားမရှိခြင်း (သို့) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလွန်စွာကြောက်နေကြသည်။ အထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းကဤအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိင်တံတွင်ပြaနာရှိသော်လည်းထိုပြimplနာကသူတို့ခေါင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ... သူတို့ကသူတို့ရှားပါးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သူတို့၏အားနည်းချက်အကြားဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသူတို့တွေ့ခဲသည်။
ဤတွင်ယောက်ျားအများစုမသိသောနည်းနည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်းအဆင်မပြေသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သော horniness တစ်ကာလ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ရက်ပေါင်း ပြင်းထန်သောဆွပြီးနောက်အခြား porn မူးရူးနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုဆေးမှခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နဲ့တူပုံရသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုခြင်းကပြtheနာကိုပိုဆိုးစေသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူ၏ ဦး နှောက်သည်ပြန်လည်ဟန်ချက်ညီရန်မတိုင်မီအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ပါကသူသည်ပိုမိုပူပြင်းသည့်နှင့်ပူပြင်းသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူ၏ ဦး နှောက်၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းသည်ခေတ္တယာယီတုံ့ပြန်မှုနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှု / ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို“ သူမအတွက်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး”
ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်လှုံ့ဆော်မှုသူ့ဦးနှောက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအတွက် arousal, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် dysregulate dopamine အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်မိမိအရက်နာနှင့်မတရားသောသူ၏အသက်တာလွှမ်းမိုးလာသကဲ့သို့, အသုံးပြုသူ equilibrium နဲ့တူခံစားခဲ့ရသောအရာကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏသူ uncharacteristic တွေ့ကြုံ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်သူ၏ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုသူမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ထိုအပြproblemနာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ် ဦး နှောက်ရဲ့ဝါယာကြိုးViagra ၏ယာယီပြင်ဆင်မှုသည်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ (၎င်းသည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုသွေးစီးဆင်းမှုကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ )
ငါ၏ visitors ည့်သည်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းအဖြေမှာ porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ လလုံးလုံးမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ရှားခြင်းသည်လုံးဝနှိုးဆွခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်သော၊ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောခြင်းကိုအသစ်ပြုလုပ်နိုင်သည် (ဦး နှောက်သည်အကန့်အသတ်မရှိသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်ထားနိုင်သည်) ။
မကြာခဏရောကျသောဤရှည် လုပ်ငန်းစဉ် "rebooting" ကြောက်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ တချို့ကယောက်ျားသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုလုံးဝကွယ်ပျောက်ကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဤအမှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးနှောက်နှင့်အမျှပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့နည်း, တုံ့ပြန်မှုမရဖြစ်လာလေ့ရှိတယ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပြန်လာပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဒါ desensitized ကြောင့်အလျှင်းမသူတို့အပေါ်မှာလှည့်ပေးသောကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးသို့သော်အချို့သောအတွေ့အကြုံကိုမီးခိုးရောင်ကာလမှာ။
ဦးနှောက်ကိုညစ်ညမ်း-ဝယ်ယူအသင်းအဖွဲ့များလိုက်စားခြင်းမှကာကွယ်နေသည်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအပျြောအပါး၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များအဘို့အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသည်။ ဒါကြောင့်ထွက်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, လေ့ကျင့်ခန်း, အောင်မြင်ခြင်းနှင့်: ဒါဟာရှာဖွေမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမြား rediscovers ။ တကယ်တော့များစွာသောလူတို့သညျလေ့ကျင့်ခန်း, အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသောရှာပါ။ ဒါဟာ Self-image ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက် homeostasis မှပြန်လာစဉ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါလျှော့ချပေးခဲ့။
[ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: "အဘယ်သို့ငါ Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်"]
Erectile ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုနားလည်ရန် Gary's ကိုလေ့လာပါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn ဆလိုက်ရှိုး.